Wararka - Dhalada quraaradaha saliida ah
Changyou Glass waa xirfad bixiye xalka baakadaha, leh khibrad ka badan 15 sano oo ah naqshadeynta caadiga ah iyo weelasha dhalada caadiga ah leh xiritaanka dhalada. Koox hal abuur leh, oo waliba ka kooban injineer iyo naqshadeeye, si dhow ula shaqeeya macaamiisha iyo wax soo saar.
Maadaama aan nahay shirkad shiineys ah oo hogaamineysa weelka dhalada, waxaan diirada saareynaa maareynta silsiladaha kaladuwan ee shiinaha si loo daboolo baahiyahaaga. Ikhtiyaarro badan oo aan ka kala dooran karno badeecadaada, waxaa naga go'an inaan bixinno oo keliya xalka kharash-ku-ool ah oo leh tayo wanaagsan.
Waxaan jeclaan lahayn inaan kugu soo bandhigno alaab dhalo dhalo ah oo shirkadeena ah:
Dhalada Saliida Saytuunka, Saliida iyo Vinegar Cruet oo lagu rakibay 17oz / 500ml Saliida Weelka wax lagu kariyo ee Glass Carafe, Saliida Daadiyaha Saliida, Maskaxda iyo Calaamadaha
Ku saabsan sheygan
QALABKA SOO DHAWEYNTA SALAXDA SIILKA EE QALABKA LOOGU SAMEEYO ： Waxay buuxin kartaa suugooyinkaaga maalinlaha ah (saliid, khal, iyo soy sooska) baahiyahaaga, iyagoo ku siinaya nolol ku habboon oo tayo leh. Isticmaalidda dhalooyinka saliidda lagu shubay halkii dhalooyinka waaweyn ee balaastigga ah ay sahlayaan in la maareeyo oo laga dhigo miiska dushiisa iyo miiskaaga mid nadiif ah, jawi kushiin ka raaxo badan.
SALDHAN OO AAN DRIP DHEERAAD AH Saliida saliida leh ： Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya dhaladan iyo dhalada saliida kale ee wax lagu kariyo waa tufka. Iyagu ma qasan yihiin sida futul-furka gawaarida. Xakamaynta si fudud loo isticmaalo ayaa kuu oggolaaneysa inaad xakameyso inta saliiddu ku soo baxdo iyadoo farta lagu fiiqay. Furitaanka saliida si adag ayaa loo xiri karaa, taas oo wax weyn ka qaban karta xiritaanka iyo cayayaanka iyo boorka.
QAADKA SALIIDKA SALAHA SALAHAN EE SAMAYNAYA NOLOL MAALINTA capacity Awoodda 17oz waa qiyaastii hal toddobaad oo ah qadarka isticmaalka saliidda Jikada, si wax ku ool ah u ilaali saliidda cusub. Mid 18/8 qallalan oo gacan ka sameysan ayaa ka caawisa buuxinta iyo buuxinta dareeraha si fudud iyada oo aan la dillaacin, marwalba dhaladaada nadiifi.
SII QEYBTA QEYBTA UU LEEYAHAY SHILKA EE CUNTO CAAFIMAAD AH ： Si tartiib ah u shub saliida si aad si fiican ugu maamusho isticmaalka saliida, ugana ilaaliso saliida inay ku soo ururto digsiga ama saladhka, si aad si fiican ugu xakameyso saliida oo aad u dareento inaad tahay qof cunto kariye ah . Isla mar ahaantaana, waxaad ku qaban kartaa dhalada qalabka wax lagu kala iibsado hal gacan, mana jiro miisaan aan loo dulqaadan karin, naqshad ergonomic ah.
DEEGAANKA SI SXB AH ： Muraayadda Changyou waxay raacdaa ilaalinta deegaanka, waxay isticmaashaa dhalooyin dhalo ah oo tayo sare leh, waxaanan ku dadaalaynaa sidii aan u ilaalin lahayn badeecada inta aan yareyneyno baakadaha, sidaa darteed haddii aad wax dhibaato ah ku qabtid alaabada aad hesho, fadlan si xor ah u nala soo xiriir annaguna waan u xalli arrimaha aad ku qanacsan tahay.
Qayb ka mid ah "Kala-baxa" Jikada
Marka la barbardhigo kuwa kale ee saliida bixiya, saliida soo saare ee la casriyeeyay waxay ku siinaysaa deganaansho maskax badan.
Dusha sare ee snap-xiranka kama tagayo saliida hawada u furan markasta. Fudud si sahlan loo isticmaali karo oo aan lahayn dhibic, furitaanka saliida waa la xiri karaa cidhiidhi, taas oo samayn karta shaqo weyn oo ah shaabadaynta iyo xajinta siigada iyo cayayaanka ka soo baxa.
Way fududahay in hal gacan lagu furo oo lagu hayo halka aad ku shubeyso, waxaad ku cadaadin kartaa madaxa madow si aad u xakameyso qulqulka saliida, waxay bixineysaa qadarka saxda ah ee cunnooyinka caafimaadka leh mana noqon doonto mid qasan sida kan had iyo goorba furitaanka saliida.
Qaybiyaha Saliida saytuunka oo leh shaabad la huwiyey oo No-faleebo ah
Joojiyuhu wuxuu leeyahay gabi ahaanba shaabadda caagga ah, maaddada caagga ah ee jilicsan ee jilicsan waxay sare u qaadi kartaa cidhiidhiga dhalada oo waxay ka hortagi kartaa qulqulka dareeraha ka dib markii dhalada saliidda ay foorarsato. Dhammaan hal xabbadood oo caag ah ayaa ka fudud in la nadiifiyo birta, naqshadeynta hawo ayaa saliidda ka dhigi karta mid si habsami leh u socota, isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale bixinnaa saliid dheeri ah oo lagu shubo qashin si loogu beddelo. Wax walboo nadiif ah ha ahaato.
La kulan Baahiyaha Maalinlaha ah ee Cruet Set
Dhalooyinka saliida lagu siiyaa ee lagu diyaariyey saddex dhalo oo waaweyn oo saliid ah (17oz) ayaa ku habboon qaybinta dareerayaasha lagama maarmaanka ah (saliid, khal iyo sooska soodhaha) jikada maalinlaha ah. Isla mar ahaantaana, saddex baakad ayaa ka jaban, awoodda 17oz waxay ku saabsan tahay hal toddobaad oo ah qadarka isticmaalka saliidda wax lagu kariyo, si wax ku ool ah u ilaali saliidda cusub.
Waqtiga boostada: Jun-07-2021